Dharka Shaqada, Dharka roobka, Alaabada Dharka Bannaanka - Tidy
Dharka roobka-Eva Peva Raincoat
Roobabka-PCV / Polyester Raincoat
Dharka roobka-PE poncho
Dharka roobka-Nylon roobka
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal naqshadeyn ah iyo kooxda howlgalka ganacsiga shisheeyaha.
Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2011. milkiilaha oo leh in kabadan labaatan sano khibrad ganacsi shisheeye iyo xarun wax soosaar oo u gaar ah, hada waxaan soosaaraynaa oo soo saareynaa alaabooyin kaladuwan oo loo dhoofiyo macaamiisha adduunka. suuqyadayada waaweyn waxaa ka mid ah Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Afrika, iyo Aasiya.
COVID-19 ayaa dadka sameysay waxay u baahan yihiin bac jirka ka badan
Khubarada ku xeel dheer dhowrista xayawaanka ayaa sheegaya in ka ganacsiga duurjoogta si weyn loo jari karo ka dib marka uu dhamaado cudurka faafa ee coronavirus. Waxay sheegeen in fayrasku u badan yahay inuu ka bilaabmay suuq lagu iibiyo xayawaanka duurjoogta ah ee Shiinaha. Fayrasku wuxuu ka yimid ama fiidmeer ama xayawaan la yiraahdo pangolin. Kadib waxay u gudubtay ...
COVID-19 waxay sameysay dad badan oo xiran goonnada ...
Faafitaanka COVID-19 coronavirus wuxuu ka dhigay dad badan oo xiran goonida go'doonka iyo gacmahooda, Shijiazhuang tidy fashion co.ltd waxay soo saartaa gogosha isalation. Maadadu waa CPE. baraha bulshada ayaa ku soo waramaya in ay sii kordhayaan dadka xiran dharka goonida u ah oo gacmahooda dhaqanaya ...
No.151 Zhongshan galbeed wadada, Shijiazhuang, Shiinaha